Maraykanka oo ka hadlay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Saldhigga ciidamada Lamu - Jowhar Somali news Leader
Home News Maraykanka oo ka hadlay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Saldhigga ciidamada Lamu
Maraykanka oo ka hadlay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Saldhigga ciidamada Lamu
War Saxaafadeed uu soo saaray Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa loogaga hadlay weerar Subaxnimadii hore saaka Al shabaab ay ku qaaday saldhig militeri oo ay isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaalla gobolka Lamu ee dalka Kenya.
Taliska AFRICOM ayaa qirey in weerar lagu soo qaaday saldhiggan milatari ee ay ciidamada cirku qaadeen ee loo yaqaan Camp Simba balse ay ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kenya iska caabiyeen.
“Al shabaab warar been abuur ah ayay ka faafiyeen weerarka iyagoo doonaya inay sumcad ku helaan weerarka.”ayuu yiri U.S. Army Maj. Gen. William Gayler, Madaxa howlgalada ee ciidamada Maraykanka ee Africa.
War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yiri in xaalada amni ee saldhiga Manda Bay ay wanaagsan tahay.
“Ururka Alshabaab waa koox argagaxiso oo marwalba dooneysa inay weerarto danaha Maraykanka,waana isla ururkii aragagaxiso oo toddobaadkii la soo dhaafay ku dileen dad rayid ah oo gaaraya siddeetan ruux magaalada Muqdisho.”ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu xusay in qiimeyn lagu ogaanayo qasaaraha uu geystey weerarkan uu socdo.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkan ay ku dileen ciidamo badan isla markaana ku gubeen diyaarado yiil garoonka ciidamada cirka ee Lamu.
Hase yeeshee dowlada Kenya ayaa sheegtay in ay ka dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab illaa afar isla markaana qasaaraha soo gaaray dhinacooda u uyahay mid aad u kooban.